“Taiwan waxay garab taagan tahay Somaliland” Madaxweynaha Taiwan
Home WARARKA “Taiwan waxay garab taagan tahay Somaliland” Madaxweynaha Taiwan
Taipei –(Berberanews) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Taiwan, Tsai Ing-wen, ayaa sheegtay in ay sii xoojinayso xidhiidhka Wanaagsan ee ay la leedahay Jamhuuriyadda nabdoon ee Somaliland waxaanay dhambaal diiran u dirtay dhigeeda Mudane, Muuse Biixi Cabdi.
“Taiwan waxay garab taagan tahay Somaliland waxanay dooneysaa inay sii xoojiso xidhiidhkeena saaxiibtinimo si ay uga faa’iideystaan ​​dadkeennu,” ayuu tidhi Madaxweyne Ing-wen.
“Fadlan aqbal, Mudane, kalsoonida iyo tixgalintayda ugu sareysa iyo sidoo kale sida ugu fiican ee aan u rajaynayo fayoobidaada shakhsi ahaaneed iyo barwaaqada sii socota ee ummadaada sharafta leh,” ayaa lagu yidhi fariinta Madaxweynaha.
Madaxweyne Tsai Ing-wen waxay si qumman u muujisay ‘hambalyo qalbi furan oo ku aaddan sannad guurada 61aad ee madaxbanaanida Jamhuuriyadda Somaliland’.
Sidoo kale, Joseph Wu, Wasiirka Arimaha Dibada ee Taiwan wuxuu isna dhanbaalkan oo kale u soo mariyay wasaaradda arimaha dibada Somaliland
Taiwan iyo Somaliland, waa laba waddan oo dimuqraadi ah ka hanaqaaday Aasiya iyo Geeska Afrika, siday u kala horreeyaan, waxay sii xoojiyeen xidhiidhkoodii sannadkii hore, iyagoo xafiisyo wakiillo ka samaystay Taipei iyo Hargeysa. Tan iyo waagaas, xidhiidhkaasi wuxuu soo jiitay dareenka wanaagsan ee caalamiga ah waxayna labada dal ka soo gudbeen marxalad kale si ay u dhisaan iskaashi soo ifbaxaya kaas oo si muuqata u wanaajiyay adeeg bixinta qaybo badan oo ka tirsan Somaliland.
Previous articleYaa Qarka u Saaran Xabaashii la Qoday Nus Qarni ka Hor?
Next articleFallaagada Tigreega oo galay Mekelle iyo Itoobiya oo ku dhawaaqday xabad-joojin